How To Dzidzisai Travel In Europe With Thalys | Save A Train
musha > Travel Europe > How To Dzidzisai Travel In Europe With Thalys
Kuenda ku Europe chiroto kuzadzika kwevakawanda. Uye kana uri rombo rakanaka zvokuti vane mukana tick rwendo ichi kure yenyu bhakiti mazita uone vose yakanakisisa nzvimbo Europe, iwe unenge uchida kuti ruzivo sezvo isingakanganwiki sezvinobvira. Saka teerera maitiro Ekudzidzisa Chitima muEurope neThalys.
Dzidzisai pakufamba ndiyo savviest nzira nepavaigona yakawanda dzinoyevedza mu Europe. Iyo Thalys ndiyo yekumhanyisa-yekumhanyisa chitima tambo iyo inogona kukuendesa iwe kune ese makuru maguta mune dhizaini uye nekumhanyisa asi isingakanganise kuchengetedzeka kwako.
Wana Pakuziva Famous "Red Train"
Kana iwe Dzidzisai Travel mu Europe ne Thalys, The zvitima vanozivikanwa se "The Red Train" nokuti noutano yakatsvuka vayo injini, unova mutsetse wechitima chakakwira-chinokwenenzvera iwe 17 maguta mhiri Western Europe mu kunyaradzwa. The Thalys mutsetse rinoumbwa French-zveBelgium mukuru-nokukurumidza nezvitima, kushumira Amsterdam nomukombiyuta HSL. With kweBrussels somurongi muzinda mutsetse, unogona kusvika maguta makuru muEurope akadai Paris, Liege, Amsterdam, Antwerp, Cologne, uye The Hague.
izvi soro-nokukurumidza nezvitima rwendo aimhanya 300 ? km paawa. Chitima mutsetse chakavanzika kuna enda kubva kweBrussels kuna Paris mu pasi neawa nehafu. Uye iwe unogona kufamba kubva Paris zvose nzira Amsterdam mu chete 3 maawa uye 20 ini! The Thalys anoita zvinopfuura 50 denderedzwa chitima nzendo zuva nezuva. Pane 27 kudzidzisa zuva vachimhanya Paris - kweBrussels nzira chete.
Kusarudza Zvakarurama Class
Vane nemakirasi matatu yebasa kusarudza kubva apo iwe Train Travel muEurope pamwe Thalys - Standard, Comfort, uye Premium.
Vose Comfort uye makirasi Premium kupa "1st kirasi" zvigaro apo unogona kunakirwa chitima kufamba ichinyaradzwa unodziya Reclining zvigaro kuti dzipe legroom. The zvachose wekusarudza Premium ndechokuti tsvimbo chitima kuti kushumira kwako kudya uye edoro chigaro chako. Uchanzwawo kuwana Thalys lounges muParis uye kweBrussels.
Zvigaro mu Nyaradzo uye Premium vanosarudzirwa mune 2 + 1 muenzaniso. Uye pamusoro mumwe nomumwe kabhini, muchawana 1 tafura nokugara, zvichiita chakakwana chevatariri vakaroorana. Standard kana "2nd kirasi" zvigaro vari 2 + 2 muenzaniso mhiri motokari.
makirasi All kupa WiFi internet-onboard, kupinda kubha buffet, uye yako yega socket socket ye plugging mu mano ako.
Kutenga Tickets nokuti Train Travel muEurope pamwe Thalys
Zviri rokumanikidzirwa kuti chitima Reservations kana uchida kufamba pamusoro Thalys nezvitima. Zvitima zveThalys zvakakwirira kudiwa saka ita shuwa kuti iwe bhuku rako chitima tikiti zvakanyanya sezvinobvira pamberi.
Unogona kuchengetera zvigaro zvenyu pamusoro Thalys kusvika 90 mazuva pachine. Uye kana iwe Bhuku rako Train Ticket Early, unogona kuponesa kusvika 75%!
Kuita reservations kuti Dzidzisai Travel muEurope pamwe Thalys, Book A Train Online. Tinoshanda Thalys kuitira hausi mhosva chero Réservation mari yechikoro uye kuwana zvakanakisisa prices zvinobvira.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-europe-thalys%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#traveleurope europetravel trainjourney Tranride nezvitima traintip chitima mazano Train Travel chitima kufamba Mazano chitima rwendo famba travelbelgium travelfrance travelgermany chavenda travelnetherlands traveltips